खेल विवरण Archives - Hamro Nepal Sports
पुलामी र कमल एरि उत्कृष्टहुदा, चितवन टाइगर्सलाइ रोमाञ्चक जित !
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता September 26, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। १५२ रनको लक्ष्य पाएको चितवनले बिराटनगर वारियार्सलाइ ३ विकेटले पराजित गरेको छ। राम्रो सुरुवात पाउन नसकेको चितवनका लागि राजेश पुलामी र भिम शार्की बाहेक अरु कुनै ब्याट्सम्यानले राम्रो रन बनाउन सकेनन। युवा खेलाडी भिम शार्कीले ११ बलमा १ छक्का र पाच चौकाको मद्दतले ३० रन जोडेका […]
सिकन्दर राजाको शानदार पारिमा बिराटनगरले खडागर्यो सम्मानजनक लक्ष्य !!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाण्डौ। एभेरेस्ट प्रिमियर लिग २०२१ अनतर्गतको आज भएको खेलमा खराब सुरुवात गरको बिराटनगरले सम्मानजनक स्कोर खडा गरेको छ। आसिफ सेख, हेमराज र रय्यन पठान सस्तैमा आउट भएपछी बिराटनगरले राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको हो। तिन विकेटको पतन पछि ब्याटिंग गर्न आएका सिकन्दर र अनिल शाहले महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दा, […]